Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ကချင်နှင့်​ ရခိုင် ဒုက္ခသည်အ​ရေး​ဆောင်ရွက်သည့်​ အနုပညာရှင်များ​ တား​မြစ်ခံရ
ကချင်နှင့်​ ရခိုင် ဒုက္ခသည်အ​ရေး​ဆောင်ရွက်သည့်​ အနုပညာရှင်များ​ တား​မြစ်ခံရ
ကချင်ပြည်နယ်နဲ့​ ရခိုင်ပြည်နယ်က ဒုက္ခသည်​တွေအတွက် ရန်ကုန်နဲ့​ တခြား​မြို့​နယ်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်​တွေမှာ သီဆို​ဖျော်​ဖြေ ရန်ပုံ​ငွေရှာ​ဖွေ​နေကြတဲ့​ အနုပညာရှင်​တွေကို အာဏာပိုင်​တွေက တား​မြစ်​နှောင့်​ယှက်​နေပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်က စစ်​ဘေး​သင့်​ပြည်သူ​တွေနဲ့​ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း​က အကြမ်း​ဖက် မီး​ရှို့​မှု​တွေ​ကြောင့်​ ဒုက္ခ​ရောက်ကြသူ​တွေကို ကူညီဖို့​ သီဆို​ဖျော်​ဖြေ ရန်ပုံ​ငွေရှာ​နေကြတဲ့​ လွတ်လပ်ငြိမ်း​ချမ်း​ပန်း​ရဲ့​လမ်း​အဖွဲ့​နဲ့​ မြန်မာ့​လူမှုဘဝ ဖွံ့​ဖြိုး​တိုး​တက်​ရေး​ အဖွဲ့​တွေဟာ အာဏာပိုင်​တွေရဲ့​ တား​မြစ်​နှောင့်​ယှက်ခံကြရတာပါ။
တနင်္ဂ​နွေ​နေ့​က ရန်ကုန် ကား​ပွဲစား​တန်း​မှာ လွတ်လပ်ငြိမ်း​ချမ်း​ ပန်း​ရဲ့​လမ်း​အဖွဲ့​ သီဆို​နေစဉ်မှာ အာဏာပိုင်​တွေက လာ​ရောက်တား​မြစ်ခဲ့​သလို လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ပိုင်ရှင်​တွေကိုလည်း​ ဖိတ်ကြား​ခြင်း​မပြုဖို့​ လက်မှတ်ထိုး​ တား​မြစ်တာ​တွေ လုပ်​ဆောင်ခဲ့​တယ်လို့​ အဖွဲ့​ဝင်တဦး​ဖြစ်တဲ့​ အဆို​တော် ကိုသား​ထွေး​က ​ပြောပါတယ်။
“ကား​ပွဲစား​တန်း​မှာ ဆို​နေတုန်း​ကိုလာတား​တာ။ ကျန်တဲ့​နေရာ​တွေက​တော့​ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်​တွေ၊​ ဥပမာ လမ်း​ ၅၀ လပ်ကီး​ဆဲလ်ဗင်း​တို့​၊​ လမ်း​မ​တော်ကဆိုင်​တွေ ကျ​နော်တို့​ကို ဖိတ်တဲ့​ဆိုင်​တွေ​ပေါ့​။ သူတို့​ကို ကျ​နော်တို့​ကို မဖိတ်ဖို့​ လက်မှတ်ထိုး​ခိုင်း​တာ​တွေ လုပ်တယ်။ သွား​ခါနီး​မှ လှမ်း​ပြောတယ်။ လက်မှတ်ထိုး​ခိုင်း​သွား​တယ်လို့​၊​ ကျ​နော်တို့​ အတွက်လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး​။ တကယ့်​ကို ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​အတွက်၊​ ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​ဆိုတာ ရှိရမယ်ဆိုတာ သိ​စေချင်တာက​ကြောင်း​၊​ ဒုက္ခသည်​တွေကို ကူညီမှာဖြစ်တဲ့​အတွက် ​ကောင်း​တဲ့​အလုပ် လုပ်တာ ဖြစ်တဲ့​အတွက် ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​ကို ပိတ်ပင်တာလား​၊​ ဘာ​ကြောင့်​ပိတ်ပင်တာလဲ သိချင်တယ်။ ​နောက်တခုက မပိတ်ဆို့​ပါနဲ့​လို့​ ​ပြောချင်ပါတယ်။”
ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်​ပေါ်​နေတဲ့​ အ​ခြေအ​နေ​တွေကို မ​မေ့​မ​လျော့​ဖို့​နဲ့​ တိုက်ပွဲ​တွေရပ်တန့်​ဖို့​ အပါအဝင် တိုက်ပွဲ​ကြောင့်​ ထွက်​ပြေး​နေရတဲ့​ ဒုက္ခသည်​တွေကို အကူအညီ​ပေး​ဖို့​ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့​ ဦး​ရဲလွင်နဲ့​ အနုပညာရှင်​တွေ ပါဝင်တဲ့​ လွတ်လပ်ငြိမ်း​ချမ်း​ပန်း​ရဲ့​လမ်း​အဖွဲ့​ဟာ ရန်ကုန် အပါအဝင် မန္တ​လေး​၊​ ​မေမြို့​၊​ မတ္တရာမြို့​တွေက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်​တွေမှာလည်း​ သွား​ရောက် သီဆိုခဲ့​ကြပါတယ်။
ပြီး​ခဲ့​တဲ့​ အပတ်ကလည်း​ မန္တ​လေး​၊​ ​မေမြို့​၊​ မတ္တရာမြို့​တွေမှာ သွား​ရောက် သီဆိုရာမှာ​တော့​ အလှူ​ငွေ သိန်း​ ၈၀ နီး​ပါး​ ရရှိခဲ့​ပြီး​ ရလာတဲ့​ငွေ​တွေကို သူငယ်တန်း​မှ ဆယ်တန်း​အထိ ဗလာစာအုပ်၊​ ​ကျောင်း​သုံး​ ဖတ်စာအုပ် အစုံ ၁၂၀၀ ဝယ်ယူ လှူဒါန်း​ခဲ့​တယ်လို့​ သူက ​ပြောပါတယ်။
ပို​နေတဲ့​ ​ငွေ​ကြေး​တွေကိုလည်း​ ကချင်ဒုက္ခသည်အ​ရေး​မှာ အဓိက အကူအညီ​ပေး​နေတဲ့​ ဘာသာ​ရေး​ အဖွဲ့​အစည်း​တွေက တဆင့်​ ကချင်ပြည်နယ် ဒုက္ခသည်​တွေအတွက် ​ပေး​အပ်ခဲ့​တယ်လို့​လည်း​ ​ပြောပါတယ်။
အလား​တူ ရခိုင်နဲ့​ ကချင်ပြည်နယ်က ဒုက္ခသည်အတွက် သုံး​ဆယ်မြို့​နယ် ဆရာမကြီး​ ​ဒေါ်ခင်မူမူ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ မြန်မာလူမှုဘဝဖွံ့​ဖြိုး​တိုး​တက်​ရေး​ ကွန်ရက်က ရန်ပုံ​ငွေရှာခဲ့​ပါတယ်။ သီဆို​ဖျော်​ဖြေပြီး​နောက်မှာ ခရိုင် အုပ်ချုပ်​ရေး​မှူး​က ဆိုင်ရှင်ကို ခွင့်​ပြုချက်မရဘဲ ရန်ပုံ​ငွေရှာ​ဖွေတဲ့​အတွက် ​ထောင်ဒဏ် ၆ လနဲ့​ ဒဏ်​ငွေ ​ပေး​ဆောင်ရမှာကို သိရှိတဲ့​အ​ကြောင်း​ လက်မှတ်ထိုး​ခိုင်း​တယ်လို့​ ကွန်ရက်အဖွဲ့​ဝင် ကို​နေမျိုး​ဇင်က ​ပြောပါတယ်။
“ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​ကို ရည်စူး​ပြီး​ ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​အတွက် လှုပ်ရှား​မှုပါ။ ဒါကို ခွင့်​ပြုချက်မရလို့​ လုပ်လို့​ရှိရင် ​ထောင်ဒဏ်ချမယ်လို့​ ​ခေါ်ယူပြီး​တော့​ ခြိမ်း​ခြောက် လက်မှတ်ထိုး​ခိုင်း​တယ်ဆိုတာ ဒီ​နေ့​ခေတ်မှာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်သင့်​တဲ့​ကိစ္စလို့​ ကျ​နော်​တော့​ ကမ္ဘာကို တင်ပြချင်တယ်။”
ဒီအဖွဲ့​က​တော့​ ရခိုင်ဒုက္ခသည်​တွေအတွက် အလှူ​ငွေ စုစု​ပေါင်း​ ၁၅ သိန်း​နဲ့​ ကချင်ဒုက္ခသည်​တွေအတွက် အလှူ​ငွေ ၈ သိန်း​ လှူဒါန်း​ခဲ့​တယ်လို့​ ဆိုပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွား​နေတဲ့​တိုက်ပွဲ​တွေနဲ့​ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွား​နေတဲ့​ ပဋိပက္ခ​တွေ​ကြောင့်​ ​သောင်း​နဲ့​ချီတဲ့​ ဒုက္ခသည်​တွေဟာ ​ထောက်ပံ့​ကူညီမှု​တွေ လိုအပ်​နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 07:55
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ကချင်နှင့်​ ရခိုင် ဒုက္ခသည်အ​ရေး​ဆောင်ရွက်သည့်​ အနုပညာရှင်များ​ တား​မြစ်ခံရ . All Rights Reserved